Ny vaovao anaty palitao
2007-07-28 @ 08:59 in Ankapobeny
Matoa aho manao izao lohateny izao dia mampilaza dieny mialoha fa tsy voamarina ilay vaovao. Ny tompon’andraikitra mivantana ihany no afaka manamarina na mandiso ny vaovao. Manaraka izany ihany koa dia tsy hisy hitabataba izany mialoha ireo tompon’andraikitra misahana izany. Teny mandeha roa ary no holazaiko etoana :
Ny voalohany tsy dia henjana amin’izany dia momba ny valimpanadinana Bepc ihany. Manahy ireo mpianatra tena nianatra teto Antananarivo renivohitra fa izay mahamarina manontolo ny matematika sy ny fizika dia heverina avy hatrany ho nahita mialoha ny lazaolana ka tsy afaka avy hatrany. Izaho izay manoratra dia efa nahavita valiny tsy misy diso amin’ireo taranja roa ireo tamin’io karazam-panadinana io ka raha izaho no tratran’izany dia ny ahy no be indrindra. Marihina moa fa rahampitso alahady vaoapeta-drindrina ny valim-panadinana Bepc eto Antananarivo. Manaraka izany ihany koa dia tsy homen’ny olona lanjany avy hatrany ihany koa ny fahafahana fanadinana Bepc amin’ity 2007 ity na dia ho afaka aza ny ankizy. Fahadisoana lehibe ho an’ny minisitera noho izany ny nanome hasina ilay fanadinana tsy ho eken’ny tontolon’ny asa fa tsy namerina azy manontolo noho ny fahihirana ihany.
Faharoa izay miantraika mivantana amin’ny toe-karena malagasy mihitsy indray raha sanatria ka marina dia momba ny entana sinoa miditra eto Madagasikara. Nisy ary olona nilaza (mpiasa tsotra ao amin’ny sampan-draharahan’ny hetra ranamana) fa manomboka amin’ny volana aogositra ho avy io dia miditra tsy mandoa haban-tseranana ny entana vita avy any Shina. Na hoe manomboka volana aogositra na hoe mandritra ny volana aogositra ihany raha entana avy any amin’ny firenena matanjaka no hiditra betsaka tsy misy haban-tseranana dia tena ho loza mitatao amin’ny mpanao taozavatra eto Madagasikara. Ny firenena vaventy aza mihorohoro amin’ny Shinoa ka raha izay isika tsy ampy hopotehiny ara-toe-karena.
Vao maika nampitombo ny ahiahy ihany koa ny fahenoana fa nanome (vonjimaika fa tsy maharitra) malalaka tsy mandoa vola fahafaha-mandefa mivantana amin’ny alalan’ny zana-bolana ny lalao rehetra hotanterahina mandritra ny lalaon’ny nosy ny fitondrana Shinoa. Dia nilaza, hitan’ny rehetra kosa tamin’ny tvplus omaly, ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny fikarakarana ity lalaon’ny nosy ity fa sambany no ho zana-bolana roa avy hatrany no hiasa hampita mivantana ny lalao ka afaka misafidy (amin’ny tvm sy ny mbs) ny mpijery amin’izay tiany arahina fa samy manana ny alefany ireo orinasa roa ireo. Tena maimai-poana tokoa ve ny tolotra sa misy takalony any ambadika any, tahaka ny nampidirana Shinoa maro noho ny lapan’ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ihany. Ny zana-bolana faharoa kosa moa dia an’ny Eutelsat izay nampitana mivantana ny lalao maro tamin’ny kitra fokontany ihany.
Tena sanatriaviko ny fahamarinan’ny vaovao anaty palitao nefa raha sanatria tokoa dia ho loza hafa no hanjo ny Malagasy.